Inona indray ary ity ?
Dia ahoana ra Jean a ! Fa inona indray ity kozinao ity e e ? Fa maninona ary no dia hampianarina an’ireny sahady ny zaza ? Dia tena nilaina ve ny nampidera iny sarina voninkazo malaza ho manintona iny teo ?
Ianao anie mba tao anatin’ilay tontolo ihany taloha e ! Ianao koa no nampianatra anay hoe itony ihany no sary fampiseho masoandro. Ka dia gaga aho omaly. Dia ilay voninkazo indray izany no diso koa ! Ireo lasa manaotao foana mahita ireny izany dia tratry ny tsy fidiny sa sendra ny tsy azo hanoharana no ilazana azy ? Tena lasa ny saiko. Inona indray ary ity kozy ity ? Tsy voatery hiteny koa anie ee ! Aleo mangina fa tsy miteniteny foana. Afaka miala amin’io toeranao io ianao dia miverina mitatatata amin’ilay onjampeo nampalaza anao taloha iny indray raha ohatra ka dia tena diso manina. Kony a !